छोरा पाउन ६ वटी श्रीमती विवाह ! - Himalayan Kangaroo
छोरा पाउन ६ वटी श्रीमती विवाह !
Posted by Himalayan Kangaroo | ३० चैत्र २०७४, शुक्रबार ०२:४८ |
रोल्पा । “बाँचुञ्जेल पाल्न र मरेपछि चितासम्म पु¥याउन छोरा नै चाहिन्छ त्यसैले छोरा जन्माउनका लागि छवटी श्रीमती विवाह गरेँ”, ठूलोगाउँ थबाङ रोल्पाका ५९ वर्षिय हित पुनले गर्वका साथ भन्नुभयो । हाल पुन सदरमुकाम लिबाङ नजिक बस्दै आउनुभएको छ । ज्याला मजदूरी गरेर जीविका चलाउँदै आएका पुनले एकपछि अर्को गर्दै छवटी श्रीमती भित्र्याएको बताउनुभयो ।
पुनको पहिलो विवाह १६ वर्ष हुँदा १४ वर्षीया किशोरीसँग भएको थियो । उहाँबाट दुई छोरी छन् । यस्तै १७ वर्षीया किशोरीलाई उहाँले ३० वर्षको उमेरमा दोस्रो श्रीमतीका रुपमा भित्र्याउनुभयो । उहाँबाट सन्तान भएनन् । त्यसपछि उहाँले एकपछि अर्को गर्दै केही वर्षको फरकमा २०, २२ वर्षको उमेरका किशोरीलाई भित्र्याउने क्रम जारी रह्यो । उहाँकी कान्छी श्रीमती २२ वर्षकी हुनुहुन्छ । यसअघि भने उहाँले पाँचौँ श्रीमतीका रुपमा ५६ वर्षको उमेरमा ५४ वर्षीया विधवा महिलासँग प्रेम विवाह गर्नुभएको थियो । उहाँबाट पनि छोरा नभएपछि एक वर्ष पहिले २१ वर्षीया युवतीलाई श्रीमतीका रुपमा भित्र्याएको उहाँको भनाइ छ ।
यसरी छैटौँ श्रीमतीबाट उहाँको छोरा जन्माउने धोको पूरा भएको छ तर सुखी जीवन जीउने सपना भने साकार हुन सकेको छैन । उहाँकी कान्छी श्रीमती चौबिसै घण्टा मदिरा सेवन गरी बेहोस हुने गरेपछि उहाँलाई मानसिक तनाव बढ्दै आएको छ, जसका कारण उहाँले शारीरिक तथा मानसिक रुपमा श्रीमतीलाई यातना दिँदै आउनुभएको छ । चार महिनाको बच्चा धुरुधुरु रोइरहँदा पनि बच्चा सम्हाल्न नसक्ने गरी मदिरा सेवन गर्नुले यो परिवारलाई विक्षिप्त बनाएको छ ।
‘दुई श्रीमतीको पोई, कुनाबसी रोई’ भने झैँ श्रीमतीले घर भरिँदा उहाँलाई शारीरिक तथा मानसिक रुपमा पीडा थपिँदै गए पनि यसको कुनै असर नभएको उहाँले बताउनुभयो । यसरी एकमाथि अर्को सौता हाल्दै गएपछि केहीवर्ष पहिले उहाँकी जेठी श्रीमतीले बहुविवाहको मुद्दा चलाउनुभयो । जसका कारण उहाँले साढे एक वर्षको जेल जीवनसमेत बिताइसक्नुभएको छ । तर जेलबाट निस्किएर पुनः विवाह गरेको बताउने पुनले विवाह गर्नु र छोड्नुलाई सामान्य रुपमा लिएको बुझिन्छ ।
आफू ज्याला मजदूरी गरेर घर फर्कने बेला मदिरा सेवन गरेर श्रीमती एकतिर लड्नु र चार महिनाको बच्चा अर्कोतिर रोइरहनुले वरपरका छिमेकीलाई समेत हैरानी हुने गरेको छिमेकीले बताएका छन् । यसरी विवाह गरेका अन्य श्रीमतीले छोडे पनि उहाँका तीनवटी श्रीमती भने उहाँकै संरक्षणमा फरक फरक स्थानमा बस्दै आएका छन् ।
अर्को कुरा घरमा श्रीमती भएको देख्दादेख्दै बाबुको उमेरको पुरुषलाई श्रीमान्का रुपमा स्वीकार्नु महिलाको मूर्खता हो । महिलाका पक्षमा कानून बनिरहँदा तथा कार्यान्वयन भइरहँदा यसरी महिला अधिकारको दुरुपयोग गर्नु वा आफ्नो कर्तव्य बोध नगर्नुले समाजलाई अमर्यादित तथा दूषित बनाउन सक्छ । त्यसैले कानून विपरीत कार्य गर्ने महिला होस् वा पुरुष दुवै सजायको भागेदार हुनुपर्छ । अञ्जानमा सौतामाथि पर्नु दुःखद पक्ष भए पनि जानाजान सौतामाथि, त्यो पनि पाँचौँ छैटौँ श्रीमतीका रुपमा भित्रिनु बिलकुलै राम्रो होइन, उहाँले भन्नुभयो ।”
Previousअष्ट्रेलियामा आकर्षक रोजगारीको नाममा नेपालीहरु ठगिने क्रम बढ्दो, दुतावासद्वारा सतर्क रहन अनुरोध
Nextभारतमा हावाहुरीले १५ को मृत्यु, ताजमहलमा क्षति
आज तमाङ र शेर्पा समुदायकाे ल्होछार पर्व
४ फाल्गुन २०७४, शुक्रबार ०२:३७
चितवनको नारायणी किनारमा हुने महायज्ञको उद्घाटन उपराष्ट्रपति पुनले गर्ने
९ माघ २०७६, बिहीबार १४:४५
आजको राशिफल : मिति २०७४ साल कार्तिक २२ गते, बुधबार
२२ कार्तिक २०७४, बुधबार ०१:५४
अनुहारमा फाउन्डेसन लगाउने सही तरिका (भिडियो)
२४ जेष्ठ २०७६, शुक्रबार ११:३१